Benjamin Netanyahu oo wacay wariye Sacuudiyaan ah & wariyihii oo heeso amaan ah uqaaday | Caalamka.com
Home CAALAMKA Benjamin Netanyahu oo wacay wariye Sacuudiyaan ah & wariyihii oo heeso amaan...
Benjamin Netanyahu oo wacay wariye Sacuudiyaan ah & wariyihii oo heeso amaan ah uqaaday
Wariye Caan ah oo udhahay dalka Sacuudiga laguna magacaabo Maxamed Sacuud ayaa ka soo muuqday muuqaal wicitaan ah oo udhaxeeya isaga iyo Ra’isul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu.
Wadahalka ayaa labada dhinaca ayaa waxa uu ka suura gal barta FaceTime, Mohammed Saud ayaana qayb ka ah ilaa 6 wariye oo sacuudiga udhashay kuwaas oo u olaleeya in ay xiriir yeeshaan Isarel iyo sacuudiga iyaga oo Falastiiyiinta usheega in ay isaga baxaan dhulka daanta galbeed iyo Gaza isla markaana ay ubaqoolaan dalka urdun.
wariyaha ay dadka carabta iyo muslimiinta ah aad unecebyihiin ayaa bartiisa twitterka si jees jees ah usoo galiyaya fiidiyoow laga duubay isaga iyo Netanyahu iyaga oo ku dahlaya taleefanka waxa uuna ku soo qoray: “Waxaan rajeynayaa inuu guuleysto oo nabad ka keeno Bariga Dhexe. Netanyahu waan kugu mahadinayaa oo waan ku jeclahay. Ilaahay ha barakeeyo adiga iyo dhammaan reer binu Israa’iil.
Ra’isyl wasaaraha yahuuda Netanyahu ayaa usheegay Maxamed Saud in uu aad kaga xuntahay maadaama uusan codayn karin hadalkaas oo ah mid uu ku xoojinayo olaliohiisii doorashada ee uu ku guulaysatay.
Wariyah reer sacuudi oo hadalka Netanyahu si wayn ucajabiyay ayaa bilaabay inuu u qaado heeso ku saabsan Benjamin Netanyahu oo ay inta badan ku qaadaan taageerayaasha ra’iisul wasaaraha.
Netanyahu ayaa sheegay inuu ku guuleystay codbixin loo qaaday hoggaanka xisbiga uu ka tirsan yahay ee Likud kaas oo ay xubnihiisa gaarayaan 116,000 waxaana ucodeeyay 49% Netanyahu, oo hada ah 70 jir , ayaa gudaha israel waxa uu wajahaya eedeymo la xiriira laaluush iyo musuqmaasuq, halka caalamka Islaamka uu ka yahay nin danbiila ah oo xasuuq ba’an ugaysatay haween iyo caruur uu dhulkoodii xoog kaga qabsaday.